Zinedine Zidane Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Dhaawicii Cristiano Ronaldo Ee Kulankii El Clasico Iyo Inuu Soo Laaban Doono Ka Hor Kulanka Liverpool : SalaanMedia
Zinedine Zidane Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Dhaawicii Cristiano Ronaldo Ee Kulankii El Clasico Iyo Inuu Soo Laaban Doono Ka Hor Kulanka Liverpool
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay xaalada dhaawicii xidiga kooxdiisa ee Cristiano Ronaldo ku soo gaadhay kulankii El Clasico ee xalay ka dhacay Camp Nou, wuxuuna laafta u qaboojiyay jaamaahiirta kooxdiisa ee ka walwalsanaa in Ronaldo uu seegi karo finalka UEFA Champions League ee ay Liveprool la ciyaari doonaan.
Zinedine Zidane ayaa waqtigii nashada badalay Ronaldo isaga oo ciyaarta soo galiyay Marco Asensio wuxuuna sheegay in aanu ahayn dhaawac wayn balse uu rajaynayo in uu ka soo kabsan doono isla markaana waxa uu hubaal ka dhigay in uu finalka Kiev ee Champions League uu diyaar u noqon doono.
Dhinaca kale Zidane ayaa wax laga waydiiyay bandhigii Gareth Bale iyo Karim Benzema oo uu Ronaldo kula soo bilaabay shaxdiisii kulankii Camp Nou kadib markii aanu waqti dheer shaxdiisa ku soo wada bilaabin BBC.
Ugu horayn Zinedine Zidane oo ka hadlaya xaalada Ronaldo ayaa yidhi: ” Hadda dareen fiican ma laha, laakiin waxaan filayaa in ay noqon doonto dhibaato yar, kaliya waa jug. Waxba ha ka walwalina finalka, halkaas ayuu joogi doonaa”.
Laakiin Zinedine Zidane ayaan garanayn waqtiga uu Ronaldo maqnaan doono iyada oo maanta oo isniin ah qiimayn lagu samayn doono wuuxuna yidhi: ” Anigu idiinma sheegi karo inta uu maqnaan doono, laakiin waxa uu sheegay in aanu filayn in ay wax badan tahay. barri (maanta) ayaanu arki doonaa”.
Dhinaca kale Zidane oo wax laga waydiiyay BBC oo kulankii Camp Nou ee Barcelona shaxdiisa ku soo wada bilaabay ayaa yidhi: “Waxa ugu muhiimsani waa in ay si fiican u shaqeeyeen. Benzema wuu ku lug lahaa, waxaana markasta jira waqti adag oo xili ciyaareedka ah, maalintii kale (kulankii Bayern) waxa uu muujiyay waxa uu leeyahay. Hadda saddex kulan oo horyaalka ah ayaanu leenahay kadib waxaanu ciyaari doonaa finalka Champions League”.
« DAAWO: Xildhibaanada Golaha Wakiillada Oo Diiday In Gacanta Xukuumadda Dib Loogu Soo Celiyo Haamaha Shidaalka Berbera
Mohamed Salah Oo Ka Naxay Goolkii Uu Messi Ka Dhaliyey Real Madrid »